Baaskiilka iyo ATV Vin Number Check iyo mooto Taariikhda Wararka
Gadashada mooto isticmaalo ama ATV loo isticmaalo la mid tahay gadashada baabuurka loo isticmaalo, waxaa jira arimo dhowr ah oo aad dooneyso inaad ogaato si aad u hubiso inaad helayso heshiis ugu wanaagsan ee suurto gal ah. Hubinta taariikhda mooto waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-. Tani waa sababta sameeyo baaritaan VIN mooto ka hor inta aadan ka shaqsi ahaan iibsato baaskiil yahay si aad u muhiim ah. Malaha mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan si loo hubiyo waa in baaskiilka ma yahay dhibane xatooyo. Ka fikir waxa ku saabsan, 2 guys jiid kartaa ilaa baaskiil kuna tuura xagga dambe ee gaari dayacan ah oo la tageen waxaa kula seconds. Dadka markasta ma daacad ah, gaar ahaan dhibaatooyinka iyo sidoo kale Kahor ah oo ku saabsan baaskiil ama ATV iyo jeeg VIN mooto caawin doonaa naftaada ilaaliso.
Hel A Check Baaskiilka Vin Halkan
Lambarka aqoonsiga gaadhiga mooto A sidoo kale waa sida baabuurta iyo baabuur ee xaqiiqda ah in waxa ay gaar u tahay baaskiil oo la tuntay on baaskiil ee warshadda. VIN ayaa waxaa inta badan ku tuntay bogga hore ee jir ah, sida caadiga ah qoorta ama meel arrintaasna waa u fududahay in ay arkaan ujeeddoyin aqoonsiyeed, iyo sidoo kale mararka qaar meel on engine ah. Haddii aadan heli karin lambarka VIN ah sudhaan oo dhan, waxaan soo jeedin lahaa in aad gabi ahaanba ka fogaadaan baaskiil in si gaar ah. Baaskiilka waxaa la kareen ama laga yaabaa in ay ahayd at hal dhibic.
By sameeyo baaritaan VIN mooto aad ka heli karto ayaa iska leh baaskiil ee la soo dhaafay, iyo haddii ay jiraan Kahor kulankii baaskiil ka amaahiya ama suurto gal ka makaanik. Ka hor inta iibsigu baaskiil aad sidoo kale ku siin karaa lambarka VIN shirkadaha caymiska aad u hesho qiime u inta aad ku kici doona si ay u hubiyaan baaskiil.
Jeeg VIN mooto ayaa sidoo kale kaa caawin doonaa go'aaminta iyo in la hubiyo in baaskiil ama ATV aan la soo xaday. Si kale oo aad samayn jeeg VIN mooto la xado waa in la tasho waaxda booliska kuugu dhow. Inta badan tani waa adeeg ah in ay preform doonaa gebi ahaanba aad si xor ah, laakiin wac ka hor inta aadan madaxa hoos u waaxda sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad ballan u jeeg sameeyo. Waxa kale oo aad eegi kartaa adiga oo DMV deegaanka, inkasta oo ay aad u qaadi karaan in lacag yar si ay u qabtaan jeegga.
Ugu dambayn, marka aad ka heli baaskiil in aad jeceshahay oo aad ku soo jiidayaa warbixin ku yaal, ka hor inta aadan ku wareejiyo lacag caddaan ah ee baaskiilka ama ATV inay hubiyaan in tirada VIN ku saabsan jir kulan tirada VIN ku horyaalka.